Monsters vs. Aliens (2009) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
PG 2009 94 min Animation
Hugh Laurie, Jimmy Kimmel, Julie White, Kiefer Sutherland, Paul Rudd, Rainn Wilson, Reese Witherspoon, Seth Rogen, Stephen Colbert, Will Arnett
IMDB Rating 6.5 ရရှိထားတဲ့ Animation ကားဖွဈပါတယျ…..ဆူစနျမာဖီလို့ချေါတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျ သူ့ခဈြသူနဲ့လကျထပျခါနီးဆဲဆဲမှာ ဥက်ကာပြံထိမှနျခံခဲ့ရပွီး ဧရာမလူသားတဈဦးအသှငျပွောငျး လဲသှားပါတယျ။ သူ့လိုထူးဆနျးသတ်တဝါတှကေို ထိနျးခြုပျတဲ့စခနျးတဈခုမှာ အထိနျးခြုပျခံထားရပွီးတဈရကျမှာ ဂွိုဟျသားစကျရုပျတဈရုပျ အေ မရိကနျမှာ လာရောကျသောငျးကနျြးခွငျးတို့ကွောငျ့ ဆူစနျနဲ့အပေါငျးအပါတို့ကို သုတျသငျခမြှေုနျးစပွေီး ပွနျလညျလှတျပေးခဲ့ပမေယျ့
သူမရဲ့ ခဈြသူဟာ သူမကိုလကျမခံတော့ပါဘူး။ ဂဲလကျဆာအမညျရှိတဲ့ ဂွိုဟျသားစကျရုပျမြားကို ထိနျးခြုပျသူဟာ သူမကိုဖမျးဆီးသှားပွီး သူမရဲ့စှမျးအငျမြားကို ထုတျယူလိုကျပွီး သူမရဲ့အပေါငျးအပါလေးမြားက သူမကို လာကယျတငျပုံတို့ကို ဇာတျလမျးဖှဲ့ရိုကျကူးထားသညျ့ Animation ကား ကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ။ခဈြစရာကောငျးတဲ့ Monster လေးမြားနဲ့ပါဝငျရိုကျကူးထားတာဖွဈတဲ့အတှကျAnimation ကွိုကျတဲ့သူမြားလကျမလှတျသငျ့တဲ့ကားလေးလညျးဖွဈပါတယျ….
IMDB Rating 6.5 ရရှိထားတဲ့ Animation ကားဖြစ်ပါတယ်…..ဆူစန်မာဖီလို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် သူ့ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ခါနီးဆဲဆဲမှာ ဥက္ကာပျံထိမှန်ခံခဲ့ရပြီး ဧရာမလူသားတစ်ဦးအသွင်ပြောင်း လဲသွားပါတယ်။ သူ့လိုထူးဆန်းသတ္တဝါတွေကို ထိန်းချုပ်တဲ့စခန်းတစ်ခုမှာ အထိန်းချုပ်ခံထားရပြီးတစ်ရက်မှာ ဂြိုဟ်သားစက်ရုပ်တစ်ရုပ် အေ မရိကန်မှာ လာရောက်သောင်းကျန်းခြင်းတို့ကြောင့် ဆူစန်နဲ့အပေါင်းအပါတို့ကို သုတ်သင်ချေမှုန်းစေပြီး ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်
သူမရဲ့ ချစ်သူဟာ သူမကိုလက်မခံတော့ပါဘူး။ ဂဲလက်ဆာအမည်ရှိတဲ့ ဂြိုဟ်သားစက်ရုပ်များကို ထိန်းချုပ်သူဟာ သူမကိုဖမ်းဆီးသွားပြီး သူမရဲ့စွမ်းအင်များကို ထုတ်ယူလိုက်ပြီး သူမရဲ့အပေါင်းအပါလေးများက သူမကို လာကယ်တင်ပုံတို့ကို ဇာတ်လမ်းဖွဲ့ရိုက်ကူးထားသည့် Animation ကား ကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Monster လေးများနဲ့ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်Animation ကြိုက်တဲ့သူများလက်မလွှတ်သင့်တဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်….
Hugh Laurie Jimmy Kimmel Julie White Kiefer Sutherland Paul Rudd Rainn Wilson Reese Witherspoon Seth Rogen Stephen Colbert Will Arnett
Amy Poehler Bridget Hoffman Chris Miller Conrad Vernon David P. Smith Ed Helms Edie Mirman Geoffrey Pomeroy Hope Levy Hugh Laurie Jack Blessing Jeffrey Tambor Jimmy Kimmel John Krasinski Julie White Kent Osborne Kiefer Sutherland Latifa Ouaou Lisa Stewart Marcelo Tubert Michelle Ruff Mike Mitchell Nicholas Guest Paul Pape Paul Rudd Rainn Wilson Reese Witherspoon Renée Zellweger Rich Dietl Richard Steven Horvitz Rob Letterman Rosemary Alexander Sean Bishop Seth Rogen Stephen Colbert Stephen Kearin Tom McGrath Will Arnett
Option 1 server.mfile.cloud 442 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 442 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 442 MB SD (480p)